Bolivia dia manao sonia ny fanamafisana ny TPAN - Ny Diabe Eran-tany
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Bolivia dia manao sonia ny fankatoavan'ny TPAN
16 / 08 / 2019 16 / 08 / 2019 ny Antonio Gancedo
Bolivia dia nanao sonia ny fitaovana ho fanamarinana ny Fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary, ka lasa fanjakana 25º amin'ny fanamafisana azy.
Izahay dia mandefa ny mailaka nalefan'i Seth Shelden, Tim Wright ary Celine Nahory, mpikambana ao amin'ny ICAN:
Ry mpikatroka malala,
Faly izahay manambara fa, fotoana vitsy lasa izay, nosoniavin'i Bolivia ny fitaovana fampanan-kery ny Fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary, lasa fanjakana 25º tamin'ny fanamafisana azy.
Midika izany fa ny TPAN dia antsasa-miditra amin’ny asa
Miarahaba ny mpikatroka nahavita azy, indrindra an'i Lucia Centellas of Efforts ny vehivavy Boliviana sy ny ekipan'ny SEHLAC.
Tena mety indrindra ny nahatratrarana io lanja lehibe io tamin'ny Andro Hiroshima.
Firenena marobe an'ny Vondrona Afovoany no nanatrika tao amin'ny trano fanatobiana entana ho fahatsiarovana ny fotoana.
Mirary soa amin'ny firesahana amin'ireo governemantanao amin'ny herinandro ho avy mba hamporisihana azy ireo hanao sonia sy / na hankatoavina ny TPAN tamin'ny lanonana ambony indrindra hotontosaina any New York amin'ny septambra 26.
Ity ambany ity dia hahita fanambarana momba ny fanadinadino anio izay azonao ampiasaina araka ny hitanao fa mety.
Seth, Tim ary Celine
Ny fifanarahana UN momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary dia antsasaky ny fidirany
6 Aogositra 2019
Ny antsasaky ny fifanekena ny fitaovam-piadiana niokleary niokleary, ankatoavina amin'ny 2017, dia efa hiditra amin'ny fampiharana.
Ity trangam-pitenenana lehibe ity dia tratrarina tamin'ny Aogositra 6, fitsingerenan'ny fitsirihana baomba atomika amerikan'i Hiroshima, raha i Bolivia dia firenena 25ª hanamarina ny fifanarahana.
Ny fanamarinana 50 dia ilaina amin'ny fifanarahana ho lasa lalàna iraisam-pirenena.
Ny firenena amerikana latina no mibaiko indrindra amin'ny fankatoavana ny fifanarahana.
Firenena sivy ao amin'ny faritra no efa nanatanteraka izany - Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Mexico, Nicaragua, Panama, Uruguay ary Venezoelà - raha ny sisa kosa dia manao sonia, anisany an'i Argentina.
Taorian'ity taona ity, ny masoivoho Bolivia ao amin'ny Firenena Mikambana, Sacha Llorentty Solíz, dia hitarika ny Komity Voalohany ao amin'ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana, forum iray miresaka momba ny famoretana sy ny filaminana iraisam-pirenena.
Ny fanamarinana io fifanarahana nataon'i Bolivia io dia mampiseho fa raisina ho zava-dehibe ny fanimbana ary efa voaofana tsara hanao io andraikitra fitarihana io.
Ny fikambanana mifandraika amin'ny ICAN Efforts an'ny Boliviana Vehivavy dia nandray tsara ilay fanavotana
Ny ezaka an'ny Vehivavy Boliviana, fikambanana mpiara-miasa amin'ny ICAN, dia nandray tsara ny fankatoavana, ary nilaza fa hita taratra ao amin'ny fanoloran-tena maharitra nataon'i Bolivia hahatratra ny fahombiazan'ny tontolo tsy misy fitaovam-piadiana niokleary izany.
SEHLAC (Fiarovana ny olombelona any Amerika Latina sy Karaiba), izay ampahany amin'ny ICAN ihany koa dia nanentana tamim-pahavitrihana ilay fifanarahana nanerana an'i Amerika Latina sy Karaiba.
Hametraka lanonana avo lenta any New York ny Firenena Mikambana amin'ny volana septambra 26, izay andrasan'ny firenena maro avy amin'ny faritra samihafa eran'izao tontolo izao hanao sonia sy hanamarina ny fifanarahana.
Ny ICAN dia hanohy ny antso rehetra mba hanatevin-daharana an'io fifanarahana io tsy misy hatak'andro, satria ny fitaovam-piadiana niokleary dia tsy misy endrika fiarovana ara-dalàna ary misy voka-dratsy ateraky ny maha-olombelona.
Fifandraisan'ny Firenena Mikambana amin'ny ICAN
(Fanentanana iraisam-pirenena amin'ny famongorana ny fitaovam-piadiana niokleary)
Loka Nobel Fandriampahalemana 2017
74 Hiroshima fitsingerenan'ny baomba